Amawakawaka ashiyekileyo njengoko uMzantsi-ntshona arhoxisa amakhulu eenqwelo moya ngoMvulo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Amawakawaka ashiyekileyo njengoko uMzantsi-ntshona arhoxisa amakhulu eenqwelo moya ngoMvulo
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Umzantsi-ntshona, owaziwa ngamaxabiso asezantsi, urhoxise ubuncinci i-1,018 yenqwelomoya ngeCawa, okongeza kwiindiza ezingama-808 ezarhoxiswa ngoMgqibelo, ngokweenkcukacha zokulandela umkhondo wenqwelomoya.
I-Southwest Airlines irhoxisa amakhulu eenqwelomoya ngoMvulo kusasa emva kokurhoxiswa kwempelaveki ka-2000.
Amawakawaka abakhweli base Mzantsi-ntshona ashiyeke exinekile kwizikhululo zeenqwelo moya kwilizwe liphela.
I-Southwest Airlines ityhola inqanaba elingaqhelekanga lokurhoxiswa kwimiba yolawulo lwezithuthi zomoya.
I-Southwest Airlines yokuphela kweempelaveki iqhubekile namhlanje, kunye nomphathi urhoxisa phantse i-350 yeenqwelo moya ngaphezulu ngoMvulo kusasa.
Iingxaki zeSouthwest Airlines zaqala ngolwesiHlanu xa imozulu enzima eFlorida kunye nemicimbi yokulawulwa kwezithuthi zomoya ikhokelela kwinani elikhulu lokurhoxiswa, ishiya abathengi kunye namalungu abasebenzi ngaphandle kwendawo.
Mawaka Southwest Airlinesabakhweli bashiyeke bethontelana kwizikhululo zeenqwelo moya.
Kwingxelo yempelaveki, iSouthwest Airlines ityhola inani elingaqhelekanga lokurhoxiswa kwimiba yolawulo lwezithuthi zomoya kunye "nemozulu ephazamisayo," esongeza ukuba basebenzela "ukubuyisela" lo msebenzi.
I-Southwest Airlines Pilot Association (i-SWAPA), emele abaqhubi beenqwelomoya abali-10,000 XNUMX, bagalele amanzi abandayo ngengqikelelo yoqhankqalazo oluqhubekayo, besithi ngeCawa eli qela "lijolise kukhuseleko lwabasebenzi bethu, abakhweli, kwaye boyisa imiceli mngeni yokusebenza, hayi umsebenzi ongekho mthethweni ngezenzo. ”
Nangona kunjalo, amajelo eendaba acaphula "imithombo yeenqwelo moya" baxela ukuba abalawuli bezithuthi zomoya babedala “ukugula” okanye ukuhamba kwiziko lolawulo lwezithuthi e-Hilliard, eFlorida ngaphezulu kogonyo olunyanzelekileyo. Uqhanqalazo oluxeliweyo lubangele "ukukhubazeka" okhubazekileyo Southwest Airlinesimisebenzi.
Ukuphendula kumarhe okuhamba ngobuninzi ngeCawa emva kwemini, Ulawulo lwezoLawulo lwezoPhapho (i-FAA) uyichithile le ngxelo, esithi "akukho FAA yokunqongophala kwabasebenzi bezithuthi ezixeliweyo ukusukela ngoLwesihlanu."
IGosa eliyiNtloko lezoLawulo lwezoKhuselo e-Jacksonville uTony Cugno uxele ukuba uthumele i-imeyile kwibhodi yabalawuli be-JAA, ebeka ityala lokuphazamiseka kwabanye abasebenzi abathatha "amagqabi aqhelekileyo avunyiweyo" kwaye abalawuli kufuneka bahlale ekhaya iiyure ezingama-48 emva kokufumana i-COVID- Isitofu sokugonya esingu-19.
I-SouthWest Airlines yaba yenye yezona zithuthi zokugqibela zomoya e-US ukwazisa igunya lokugonya abasebenzi balo ngoMvulo odlulileyo. Abanye abasebenzi abangama-56,000 base Mzantsi-ntshona kude kube nge-8 kaDisemba ukuba bagonywe ukuba bafuna ukugcina imisebenzi yabo.